Aiza ny mpitantana ny lahasa amin'ny Mac? | Avy amin'ny mac aho
Aiza ny mpitantana ny raharaha?
Jordi Gimenez | | Mac OS X, Fampiharana hafa ho an'ny Mac, Tutorials
Iray amin'ireo fitaovana ampiasain'ny mpampiasa Mac matetika ny Fanaraha-maso ny hetsika OS X. Maro amin'ireo mpampiasa tonga amin'ny OS X no avy any Windows ary io fitaovana io no azontsika ampitahaina amin'ilay "Task Manager" fanta-daza sy be mpampiasa izay tafiditra ao anatin'ny rafitra fiasa Windows. Eny, io dia momba ny fahitana ny fampiasana ny masininay amin'ny resaka fitaovana anatiny: isan-jaton'ny fampiasana CPU, Memory, Power, Disk ary Network.
Rehefa miresaka momba ny Monitor Monitor ho an'ny OS X isika dia miresaka momba ny fifehezana ny fizotranay amin'ny Mac ary azo antoka fa tena mahaliana an'ny mpampiasa sasany izany. Raha fintinina, ary ho antsika rehetra izay efa nampiasa Windows nandritra ny taona maro, dia inona izany dia ho tonga mpitantana ny lahasa izay natomboka rehefa manatanteraka ny fitambarana "Ctrl + Alt + Del", fa amin'ny Mac OS X dia antsoina hoe Monitor Monitor izy io ary mora ny mandefa azy satria manana ny fampiharana azy ao anatin'ny Launchpad, izay ahafahantsika mandefa azy amin'ny Launchpad tenany, avy amin'ny Spotlight na avy amin'ny Finder ao amin'ny folder Applications. Ho hitantsika ny antsipiriany misimisy momba an'io Action Monitor sy ireo fika kely afeniny io.
1 Ahoana ny fomba hanokafana Monitor Monitor
2 Fampahalalana momba ny manager amin'ny Mac
Ahoana ny fomba hanokafana Monitor Monitor
Raha tonga hatreto ianao dia satria te hahafantatra fotsiny ny angon-drakitra ampiasain'ny Mac vaovao nataonao. Efa nolazaiko teo am-piandohana fa manana safidy hafa isika hanokatra ity Monitor Monitor ity fa ny zavatra tsara indrindra raha handeha ampiasao betsaka izy io ary raha te hanana fidirana mora kokoa ianao, ny toro-hevitra omenay anao dia ny fitazonana ny Monitor an'ny Hetsika amin'ny toerana mora jerena hijerena ireo angona sy fizotrany amin'ny fotoana rehetra. Tsotra be ity raha hatao ary tsy hiditra amin'ny anao fotsiny ny fidiranao Launchpad> Other folder> Action Monitor ary sintomy ny fampiharana mankany amin'ny dock.
Azonao atao ihany koa ny miditra amin'ny monitor activité amin'ny alàlan'ny Spotlight na ao anatin'ny folder Applications> Utilities. Iray amin'ireo fomba telo mety aminao.
Amin'ity fomba ity ny Monitor Monitor ho an'ny hetsika dia hipetraka ao amin'ny Dock ary tsy mila miditra amin'ny Launchpad, Spotlight na Finder intsony ianao, dia tsindry iray avy hatrany io ary hanana fidirana haingana sy mora kokoa isika rehefa mipetraka eo anoloan'ny ny Mac. mamela antsika hiditra amin'ny "safidy miafina indrindra" momba ity Monitor amin'ny hetsika ity izay ho hitantsika amin'ny fizarana manaraka.
Fampahalalana momba ny manager amin'ny Mac
Tsy isalasalana fa izany no anton'ity lahatsoratra ity. Ho hitantsika ny pitsopitsony tsirairay omen'ny Monitor Monitor ho antsika ary hanaja izany ny filamin'ny takelaka hita ao amin'ity fitaovana OS X ilaina ity. Manana koa izahay bokotra misy a «I» izay manolotra anay vaovao momba ny fizotrany haingana sy ny peratra (karazana fanitsiana) amin'ny tapany ambony manolotra antsika ny safidin'ny: santionany amin'ny fizotrany, mihazakazaha ny espindump, mihazakazaha ny diagnostika ny rafitra sy ny hafa.
Anisan'ireo safidy miafina noresahintsika tamin'ny fiandohan'ny lahatsoratra ireo ny safidy mamela ny kisary dock voatsindry, azontsika atao ny manova ny fisehoany ary manampy varavarankely ao amin'ny lisitry ny fampiharana izay hiseho ny sary fampiasana. Mba hanovana ny kisary fampiharana ary hahitanao ny fizotrany mivantana izay tokony hataontsika fotsiny tazomy ny kisary dock> Ikona dock ary safidio izay tiantsika harahi-maso mitovy.
Ity miaraka amin'i Memoria dia tsy isalasalana fa ny faritra ampiasako indrindra ary izay asehony amintsika dia ny isan-jaton'ny fampiasana ny tsirairay amin'ireo fampiharana mihodina. Ao anatin'ny rindrambaiko tsirairay dia afaka manao asa samihafa isika toy ny fanidiana ny fizotrany, fandefasana baiko ary maro hafa. Ao anatin'ny safidin'ny CPU dia manana angona isan-karazany misy izahay: Ny isan-jaton'ny CPU ampiasain'ny fampiharana tsirairay, ny fotoana CPU an'ny kofehy, ny Activation aorian'ny tsy fahavitrihana, ny PID ary ny mpampiasa izay manatanteraka an'io fampiharana io amin'ny masinina.
Ao anatin'ny safidy Memory dia afaka mahita angona samihafa sy mahaliana isika: ny fahatsiarovana ampiasain'ny dingana tsirairay, ny fahatsiarovana voafintina, ny kofehy, ny seranana, ny PID (io no laharan'ny famantarana ny fizotrany) ary ny mpampiasa izay manatanteraka ireo fizotrany ireo.
Tsy isalasalana fa teboka iray hafa tokony hodinihina ity raha mampiasa MacBook isika satria manome antsika ny fanjifana ny dingana tsirairay manana fananana amin'ny Mac izahay. Ity takelaka Energy ity dia manome antsika angon-drakitra samihafa toy ny: ny fiantraikan'ny angovo amin'ny dingana, ny fiantraikan'ny angovo antonony, na mampiasa izany na tsia Nap App (App Nap dia fisehoan-javatra vaovao tonga tao amin'ny OS X Mavericks ary mampihena ho azy ny loharanom-pahalalana ho an'ny rindranasa sasany izay tsy ampiasaina ankehitriny), Sakano ny fidiran'ny mpampiasa sy fidirana.
Fantaro amin'ny rantsantanana ny zavatra vokariny Famakiana sy fanoratana dia manandanja kokoa noho ny fihazakazaky ny SSD ankehitriny. Ireo kapila ireo dia misy fahatsiarovana Flash ary azo antoka fa avo roa heny noho ny kapila HDD izy ireo, saingy "mihombo haingana" koa rehefa mamaky sy manoratra. Ao amin'ny safidy Disk an'ny Monitor Monitor dia ho hitantsika ny: Bytes voasoratra, Bytes novakiana, ny kilasy, ny PID ary ny mpampiasa ny fizotrany.
Ity no tabilao farany natolotr'ity Monitor Monitor ho antsika ao amin'ny OS X. Ao no ahitantsika ny angon-drakitra rehetra momba ny fitetezana ny fitaovantsika ary afaka mahita ny antsipiriany samihafa amin'ny fizotrany tsirairay izahay: Bytes nalefa ary Bytes voaray, fonosana nalefa ary fonosana voaray sy ny PID.
Amin'ny farany dia momba mahazo vaovao momba ny fizotrany rehetra izay ataon'ny Mac antsika, ao anatin'izany ny ao amin'ny Tambajotra, ary hahafahana manakatona azy ireo na mahatsapa ny isan-jato ampiasain'ny rindranasa sy ny fizotrany amin'ny Mac. Ary koa manana ny safidy hanovana ny kisary dock mba hahitana ny antsipirian'ny Monitor Monitor amin'ny fotoana tena izy dia tsara ny mamantatra anomalie na fanjanahana hafahafa. Ny fananana ny zava-drehetra miaraka amin'ny sary eo am-baravarankely koa dia manamora ny antsipirian'ny isa rehetra.
Mazava ho azy fa ity Monitor Monitor ity dia manamora kokoa antsika mamantatra ny fizotrany izay niahiahy anay ary koa ny safidy mamela antsika hanidy azy io mivantana avy eo, na inona na inona manamora ny asa amin'ny mpampiasa. Etsy ankilany, azo antoka fa mihoatra ny iray amin'ireo mpampiasa izay avy amin'ny rafitra fiasan'ny Windows no ampiasaina hanatanterahana ny fitambarana Ctrl + Alt + Del hahita ny Task Manager ary mazava ho azy ao amin'ny Mac OS X ity safidy ity dia tsy misy.
Ny mazava dia ny hoe raha avy amin'ny Windows ianao dia tokony hanadino ilay mpitantana asa mahazatra satria amin'ny Mac dia antsoina hoe "Monitoring de activité". Arakaraka ny hahavitanao azy dia tsara kokoa, satria hamonjy fotoana hikarohana rindranasa tsy misy ao amin'ny MacOS io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Aiza ny mpitantana ny raharaha?
toy ny mac hatrany no anaovany azy tsara kokoa noho ny windows
tommaso4 dia hoy izy:
Valio i tommaso4
Alejandra Solorzano M dia hoy izy:
Salama, mila fanampiana aho, tsy fantatro ny fomba hahitana ireto safidy roa ireto amin'ny rafitra fiasa mac. Mila fanampiana aho. Afaka manampy ahy ve ianao? Mila azy amin'ny alakamisy, misaotra… ity dia:
Fitantanana fitaovana Mac
Valiny tamin'i Alejandra Solorzano M
madisson dia hoy izy:
Ilaiko izay mpitantana ny mitondra mac
Mamaly an'i madisson
Ny BioShok Remastered dia havoaka amin'ny faran'ity taona ity ho an'ny macOS
Omeo sento ny freshness sy ny kanto ny Apple Watch anao